Thola ukwazisa Ngezici Zokuqamba Amakholi Okuqukethwe Okudume Kakhulu Nokudatshulwa KwamaWebhu Okuzosigcina Isikhathi Sethu - Ukubuyekezwa Kwesibili
Amathuluzi wokukhipha iWebhu aklanyelwe ukuqoqa ulwazi olubalulekile kumawebhusayithi. Benza imisebenzi yabo ku-Java, C ++, Python, Ruby, kanye nezinye izilimi zokuhlela. Ezinye ze- ukukhwabanisa iwebhu nezinsizakalo zezimayini zokuqukethwe zipholile ngokwanele ukuze uthole idatha enembile nangenaphutha phakathi kwemizuzwana. Ezinye zezinhlelo ezingavamile kakhulu zixoxwe ngezansi:
1. Isikrini sesikrini
2. Ngenisa. Io
Ngenye yezinsizakalo eziwusizo kakhulu futhi ezingavamile zedatha ezosindisa isikhathi sethu. Ngenisa. Io wuhlelo lokusebenza oluphelele, olukhululekile lwedeskithophu olusiza ukudlulisa idatha ewusizo kusuka kunani elingenamkhawulo lamasayithi namabhulogi. Le nsizakalo ithatha amakhasi ethu ewebhu njengomthombo wedatha ongase ukwazi ukukhiqiza ama-API. Ngakho, kusindisa isikhathi sethu futhi kufanelekile amabhizinisi namabhizinisi amakhulu. Ngenisa. Io ayisebenzisi amakhasi owawucubungile ngaphambilini. Ukungalungi kuphela kokungenisa. Io ukuthi awukwazi ukuhamba kusuka kwesayithi eyodwa kuya kwesinye. Kusho ukuthi kuzodingeka ufake ama-URL ofuna ukukhipha idatha kusuka ngesandla.
Kuyinto yesevisi yokuvuselela idatha. I-Uipath igxile ekwenzeni idatha kanye nokuqukethwe kwezimayini kubasebenzisi bayo. Kungenza imisebenzi eminingi ngesikhathi futhi kufanelekile kokubili amakhodi kanye non-coder. Ngaphezu kwalokho, lolu hlelo lunemikhakha ehamba phambili yokuhamba ngekhasi futhi lungafaka amafayili akho e-PDF, ikuthola imiphumela oyifunayo futhi ulondoloze isikhathi sakho kusizinda sedatha. Udinga nje ukuvula idijithali, usho i-URL ofuna ukuyifaka idatha futhi u-Uipath uzoqala ukwenza umsebenzi wayo. Lolu hlelo lokusebenza lukwazi ukumba kalula i-flash futhi lukuthola idatha efundekayo futhi engahleliwe ngaphakathi kwendaba yamaminithi. Ungathola imibhalo ehle ye-CSV ne-Excel. Ukuba uhlelo lwe-premium, i-Uipath ngeke ihambisane nokuqala njengoba kuyintengo encane.
4. I-Kimono Labs
I-Kimono Labs yiyona yokuqala yokukhetha abahleli, izintatheli, ama-freelancers, ama-webmasters, amabhizinisi, nabantu abangekho kwezobuchwepheshe. Yenza imisebenzi eminingi yokukhipha idatha kanye nokusebenza kwemayini yokuqukethwe ngesikhathi esisodwa. Leli thuluzi linikwe amandla ngesici sokuphila kwedatha yesiphila, esikuvumela ukuthi ubuke noma uqaphele ikhwalithi yedatha ngenkathi ishaywa. Futhi, i-Kimono Labs iyahambisana nazo zonke iziphequluli zewebhu nezinhlelo zokusebenza. Akunikezi noma iyiphi indawo yokuhambisa ikhasi, futhi kuzodingeka uchithe isikhathi esithile ukuqeqesha i-Kimono Labs ngaphambi kokuba idatha idonswe kumafomethi afisa Source .